अभिनेत्री नुसरतको छोराको असली पिता आखिर को हुन् ? « रिपोर्टर्स नेपाल
अभिनेत्री नुसरतको छोराको असली पिता आखिर को हुन् ?
एजेन्सी, १५ भदौ । बंगाली अभिनेत्री तथा टीएमसी सांसद नुसरत जहांले २६ अगस्टमा छोराको जन्म दिएकी छिन् । आमा बनेपछि नुसरतलाई सामाजिक सञ्जालमा धेरैले बधाई समेत दिएका थिए । उनै अभिनेत्रीलाई अहिले बच्चाको पिता को हो भन्दै सवाल पनि गरिरहेका छन् ।
केही समय अगाडी नुसरतले ब्यापारी निखिल जैनसँगकोे विवाह अस्विकार गरेकी थिइन् । उनको यस विषयले सामाजिक सञ्जालमा निकै स्थान पाएको थियो । निखिल जैनसँगको विवाद टुंगिएपछि उनले आफु गर्भवती भएको घोषणा गरेकी थिइन् । नुसरतले गर्भवती भएको घोषणा गरेसँगै निखिल जैनले पनि बच्चा आफ्नो नभएको बताएका थिए ।
समाचार अनुसार, नुसरत जँहाले आफ्नो बच्चाको पिताको नाम बताउन अहिलेसम्म पनि बताउन अस्विकार गर्दै आएकी छिन् । उनले आफु सिंगल मदर बन्ने पनि स्पष्ट पारेकी छिन् ।
उनले आफ्नो छोराको नाम इर्शान राखेकी छिन् । हाल नुसरत र अभिनेता यश दासगुप्ता रिलेसनसिपमा रहेको खबर बाहिर आएको छ । डिलीवरीको समयमा नुसरतलाई यश दासगुप्ताले नै अस्पताल पु्र्याएका थिए । यद्यपी उनीहरु दुईजनाले भने आफुहरु रिलेसनशिपमा रहेको आधिकारीक रुपमा बताएका छैनन् ।
काठमाडौं, ७ असोज । गायन रियालिटी शो ‘द भ्वाइस किड्स नेपाल’ मा चारजना निर्णायक सार्वजनिक
काठमाडौं, ६ असोज । अभिनेत्री प्रियंका कार्की छोरीलाई जन्म दिएर आमा बनेकी छिन् । प्रियंकाले
काठमाडौं, ६ असोज । कलाकारका लागि कलाकार’ भन्ने नाराका साथ अन्तर्राष्ट्रिय खुल्ला अनलाइन कला प्रतियोगिता
नेपाल ब्युटिसियन एण्ड फेसन अवार्ड–२०७८ सम्पन्न
काठमाडौँ, ६ असोज । क्रियटिभ ईन्साइट मिडिया प्रालिको आयोजना तथा रोज शिप बिकाश तालिम केन्द्रको
जेलबाट बाहिरिदा राज कुन्द्राको निधारमा टिका कसले लगाइदियो ?
एजेन्सी, ५ असोज । बलिउड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टीको पति राज कुन्द्रा सोमबार धरौटीमा रिहा भएका
काठमाण्डौ ४, असोज । रिबन इन्टरटेनमेन्टले आयोजना गर्दै आईरहेको विवाहित महिलाको लागि नेपालको सबैभन्दा ठूलो
छोटा कपडा लगाउदैमा महान बनिदैन्ः बिजेपी नेता
एजेन्सी, ४ असोज । राखी सावंत अभिनय भन्दा पनि राजनेताहरुको भनाईको कारण चर्चामा रहन्छिन् ।
आफ्नै बुवा आमाविरुद्ध चर्चित अभिनेताले दिए उजुरी
एजेन्सी, ४ असोज । साउथ फिल्मका चर्चित अभिनेता थलापति विजय फेरी चर्चामा आएका छन् ।